बाल संसार Archives - NepalDut NepalDut
पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ र डिजल–मट्टीतेलमा २७ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि
एसपीपीबारे जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइने
जस्तो पनि बन्न सक्ने कस्तो आनीबानीकहिले हिउँ, कहिले बाफ कहिले तरल पानी पौडी खेल्न नुहाउन र तिर्खा लाग्दा पिउनपानी नभई सम्भव छैन जीवन त्यसै जिउनयही पानीले पोल्छ कहिले, कहिले शीतल हुन्छयही पानीले फोहोर ल्याउँछ यही पानीले धुन्छ समुद्र र नदी-खोला छाँगा-छहरामापोखरी र इनार अनि अग्लो पहरामाखहरे भई बग्छ पानी तालसँगै जम्छपहरामा रसाएुनि यही धर्तीमा रम्छ खाँदा स्वाद छैन हेर्दा रङ्ग पनि छैनलुगा लाउन मिल्लाजस्तो अङ्ग पनि छैनपानीजस्तो नहोऊ तिमी भन्ने… पुरा पढौ
अचल भै बस्दछधरतीमा टेकेरअचम्मै पो लाग्दछयसको रुप देखेर गजधम्म परेरबसेको छ यसरीआयो होला कहिलेकहाँबाट कसरी ? बनेको छ बलियोढुङ्गा अनि माटोलेशिखरैमा पुर्याउँछडोहोर्याउँदै बाटोले अटल छ पहाडधरतीको काखमापहिलो झुल्को घामकोयही डाँडा पाखामा तलबाट माथि हेर्दाटोपी खस्ने चुचुरोकतै देख्छु सानासानाथुम्काथुम्की टाकुरो रुख पात हरियाफूल पनि फुलेकाचरिबरी जनावरयसकै काखमा डुलेका आँधी आउँदा हल्लिन्नपानी पर्दा बग्दैनसित्तिमिती कसैसँगरत्ती पनि डग्दैन यही पहाडको काखमामेरो पनि घर छडर छैन कसैकोमलाई यस्कै भर छ डुल्दै आउँछन् बटुवाहेरी दङ्ग… पुरा पढौ
बाल कविता : मौरी
मिहिनेती छ ऊ, गर्छ धेरै कामफूलको रस बटुल्छ, भन त्यस्को नाम ढिला सुस्ती गर्दैन, त्यस्तो मन पर्दैनआफ्नो काम नसकी, पछि हट्दै हट्दैनमिलेर ऊ बस्दछ, चाहिँदैन ठूलो ठामभुन्भुन गर्छ, गुन्गुन गर्छ, के हो त्यस्को नाम फूलको रस चुसेर ल्याउने गर्छ काममह बनाई थुपार्छ मौरी त्यस्को नाम एउटा नायक हुन्छ घारमा काम सिकाउनेथरिथरि फूलको रस झिकाउनेअह्राउने पह्राउने गर्छ उसले कामसबै मन पराउँछन् के हो त्यसको नाम व्यवस्थित बनाउँछ समुदायलाईअल्छी बन्न दिँदैन कर्मी… पुरा पढौ
बालगीत : घर कहाँ पुतलीको…
विद्यार्थीघर कहाँ पुतलीको, बाँच्न के के खान्छन् ?भनिदिनू गुरुआमा, कहाँसम्म जान्छन् ? गुरुआमाप्रकृति हो घर हेर, फूल रस खान्छन्स्वतन्त्र छन् उड्नलाई, जहाँ पनि जान्छन् । विद्यार्थीकस्ता कस्ता हुन्छन् यिनी, थरीथरी देख्छु,भनिदिनू गुरुआमा, म कापीमा लेख्छु । गुरुआमाधेरै रङ्ग हुन्छन् सुन, लेख्दालेख्दै गल्छौबनाउन चित्र तिमी, जति रङ्ग दल्छौ । विद्यार्थीदिनभरि कहाँ हुन्छन्क, हाँ हुन्छन् राति ?भनिदिनू गुरुआमा, को को हुन् त साथी ? गुरुआमादिनभरि स्कुलमा, घर हुन्छन् राति,माया गरे पुतलीको, तिमी… पुरा पढौ
बाल कथा : अनलाइन लुँडो
बिहान आठ बजेको थियो । सरिताले साथीलाई फोन गरिन् । “हेल्लो आभास १ तिमी मेरो घरमा नआऊ है, कोरोना भाइरस आएको छ । आउनु हुन्न । आयौ भने कोरोना सर्छ रे ममीले भन्नुभ’को ।” आभासले भन्यो –“आउँदिनँ सरिता आउँदिनँ । कोरोना भाइरस आइसक्यो । अब हामी केही दिन घरमै बस्नुपर्छ ।” सरिताले दिनभरि बस्दा अल्छी लाग्दैन भनेर सोधी । “यत्तिकै घरमा बस्दा त साह्रै अल्छी लाग्ने रैछ सरिता । लागेर… पुरा पढौ
बालगीत : आकाशमा लागेछ…
आकाशमा लागेछ कालो कालो बादल गीत गाउन भनेर भाइले झिक्यो मादल । हाम्रै नजिक बस्यो सानू पप्पी आएर नाच्न थाल्यो बिल्लीले मीठो गीत गाएर । माकुर माकुर परेवा घुर् घुर् गर्दै हामीसँगै नाच्न थाल्यो वर वर सर्दै । बाहिर पानी परेनि असिना नै झरे नि बाबाआमा आउनुभो परर ताली लाउनुभो । पुरा पढौ